Ukuhambelana kweScorpio kunye neSagittarius - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kweScorpio kunye neSagittarius
Ukuhambelana kweScorpio kunye neSagittarius
Ubuhlobo phakathi kweScorpio kunye neSagittarius bunokuba nzima kancinci kuba eyokuqala inobuzaza kakhulu, ngelixa eyesibini ifuna ukonwaba.
Nangona kunjalo, aba babini banokufunda okuninzi omnye komnye, njengoko umntu enokungazinzi, ngelixa omnye enokufundiswa ngendlela yokuba noxanduva ngakumbi. I-Archer ingabonisa iScorpio ukuba ivuleke ngakumbi ngezimvo ezintsha kwaye nabantu, iScorpio inokufundisa iSagittarius ubuchule.
Iikhrayitheriya IScorpio kunye neSagittarius Friendship Degree
Umdla omnye Umyinge ❤ ❤ ❤
Ukunyaniseka nokuxhomekeka Yomelele ❤ ❤ ❤ ❤
Ukuthembela kunye nokugcina iimfihlo Ngaphantsi kwe-avareji ❤ ❤
Ukonwaba kunye nokuzonwabisa Yomelele ❤ ❤ ❤ ❤
Amathuba okuhlala ngexesha Umyinge ❤ ❤ ❤
Ubuhlobo phakathi kwaba babini bunokuba yimeko yokuphumelela kubo bobabini, nokuba iScorpio ngamanye amaxesha sinokucaphuka kukuthembeka kuka-Archer kwaye owokugqibela angaphambana ezama ukufumana iimfihlo zeScorpio.
Nangona kunjalo, xa udibanisa imikhosi, zinokusebenza ngokukuko kwaye ziyonwabisa njengepere. Bahluke kakhulu, kodwa zininzi izinto abanokufundisana zona.
IScorpio inomdla kwaye ingamfundisa uMtoli ukuba azalisekise amaphupha akhe. Ukubuya, i-Sagittarius elungileyo iya kuhlala ilandela iScorpio.
Ngokucacileyo, iScorpio ecingayo ayinakuze ivumelane nokuba yimalini iSagittarius echitha kwizinto ezingenamsebenzi. Le yokugqibela iya kuhlala ikrokrela kuba eyokuqala iyafihlwa.
Nangona kunjalo, ukuba aba babini banokwamkela bobabini banobuthathaka kwaye amandla abo kufanele ukuba axhatshazwe, kunokuba lula kubo ukuba babe ngabahlobo abakhulu kwaye babe nengqondo evulekileyo xa besombulula iingxaki zabo okanye ukungavisisani.
Ngapha koko, kubalulekile ukuba bobabini bangabi namdlandla kuba bathanda ukukhawulezisa izinto. Olunye unyamezelo lunokunceda ngokwenene ubuhlobo babo buhlale ngexesha kwaye bunyaniseke.
I-Sagittarius ifuna iintlobo ngeentlobo kwaye ityale amandla ayo kwizinto ezintsha. IScorpio inomdla ngakumbi ekumiseni unxibelelwano lweemvakalelo. Ke ngoko, ekuqaleni kobuhlobo babo, uMtoli unokuziva ngathi akanako ukuphila kwiimfuno eziphezulu zeScorpio.
Nangona kunjalo, ukuba iScorpio igcina iimvakalelo zayo zisemgceni, ubuhlobo phakathi kwabo bunokuba namandla kakhulu kwaye buvuselele ngokwenyani njengoko iScorpio kunye nabahlobo beSagittarius benendlela efanayo ebomini, singasathethi ke ukuba bobabini banomdla wokuhamba nokufumana inxaxheba kwiihambo ezintsha.
I-Sagittarius inokucinga ukuba iScorpio inenkani kwaye ingqongqo, ngelixa eyokugqibela inokubona eyokuqala inentloko elula kakhulu. Ubuncinci ubuhlobo babo buya kugcinwa buphila ngokuthanda kwabo ulwazi kunye nokuphonononga imimandla emitsha.
Abahlobo ababini abafuna ngenkani
Iplanethi iPluto ilawula iScorpio, ngelixa iJupiter ilawula iSagittarius. UPluto ujolise kakhulu ekuzalweni ngokutsha nakwinguqu. IJupiter imalunga nefilosofi, ukuqiniseka, ukuthanda ukwazi iindawo ezintsha kunye nokwanda.
Zonke ezi planethi zimele ukukhula kwaye zinamandla obudoda, oko kuthetha ukuba i-Sagittarius kunye nabahlobo be-Scorpio banokuncoma kwaye baxhasane.
IScorpio siManzi, ngelixa uMlilo woMtoli, oko kuthetha ukuba le yokugqibela iza nezimvo kwaye isebenza ngokuzenzekelayo kwaye eyokuqala ihlala ifuna isizathu sokwenza into.
Kunganzima kubo ukuba baqonde ukuba baphefumlelwa phi xa besohlukana, kodwa ukuba bayavumelana omnye nomnye malunga nokuba ubuhlobo babo bubalulekile, abanakuze bayeke ukuxhasa nokunyaniseka omnye komnye.
IScorpio ifuna ukuzinikela kubahlobo bayo, oko kuthetha ukuba inyanisekile. UMtoli udume ngokuba ngumhlobo othembekileyo naye.
Aba bantu babini baya kuhlala belapho ngamaxesha emfuno, ngakumbi iScorpio, eya kuthi incede iSagittarius ukuba iphume engxakini ngokutshintshela uncumo olunyanisekileyo.
I-Sagittarius soze ihloniphe nawuphi na umthetho okanye ishedyuli. Kuyenzeka ukuba alibale ngentlanganiso kunye ne-Scorpio, into enokwenza ukuba le yokugqibela ibe nomsindo.
ngowuphi umqondiso 22 sept
Nangona kunjalo, xa i-Sagittarius iza kuqhekeza isiqhulo, wonke umntu uyakulibala malunga nokuba ebesemva kwexesha.
I-Scorpio ilungisiwe, i-Sagittarius inokuguquguquka, okuthetha ukuba banako ukugxila ngaphezulu kweprojekthi enye ngexesha, kodwa kuphela kukugxininiswa kweScorpio kunokunceda yonke into igqitywe.
I-Sagittarius iyathanda ukutshintsha iiprojekthi kunye neendlela zayo, ke abantu abakulo mqondiso abalunganga kakhulu ekugqibeni iiprojekthi. I-Archer iya kuhlala ixabisa ukuba zingaphi iinzame ezenziwa yiScorpio, nokuba iiScorpios zinenkani kwaye zifuna ngenkani.
I-Scorpio efanayo kufuneka ivumele ii-Sagittarians ukuba zijikeleze ngokukhululekileyo kwaye zibe nendawo yazo. Kulula iScorpio ukunceda umtoli enze amaphupha akhe azaliseke, nokuba lo mthonyama ulahlekelwe ngumdla okanye hayi.
I-Sagittarius inokubonisa iScorpio ukuba kubaluleke kangakanani na ukuba bhetyebhetye, kwaye ukuzimisela okucocekileyo ngamanye amaxesha akonelanga. Eyona nto inkulu ngobuhlobo phakathi kwaba babini kukuba bobabini baziva bekhuselekile kwaye kwangaxeshanye bekhululekile phambi komnye nomnye.
Nje ukuba bafunde indlela yokubona umhlaba ngamehlo, ukuhambelana kwaba bahlobo kuya kuba kokufanelekileyo. Bafuna lonke ixesha ukunxibelelana kwaye bayayixabisa indlela abahluke ngayo ukuba bafuna ukuba nobuhlobo obunomdla omnye komnye.
IiScorpios zithembekile kwaye ziyaxhasa njengabahlobo. Nangona kunjalo, abo babathandayo kufuneka baziqhelanise nendlela ababuphila ngayo ubomi babo kwaye baqonde ukuthembeka kwabahlali akupheli.
Bangathetha iiyure nomntu othembekileyo, ndingasathethi ke ukuba bahlala bekhona nabanye, ngamaxesha oswele.
IiScorpios azinabahlobo baninzi kuba akukho nangayiphi na indlela ekulula ukuba zivuleke, kwaye xa zingcatshwa, kubonakala ngathi azilibaleki ukuba kwenzeke njani izinto.
Abantu abazalelwe kulo mqondiso bayakuxabisa ukunyaniseka kwaye aboyiki nangayiphi na indlela ukuthetha inyani, nokuba ithini na imeko. Abo kwenzekile ebomini babo akufuneki bawele kuba banempindezelo enkulu kwaye banokuba rhabaxa xa befuna ukwenzakalisa umntu.
Kuyenzeka ukuba bathande okanye babathiye ngokwenene abanye, kuxhomekeke ekuziphatheni nakwabalinganiswa. Ukufihla kakhulu kunye nokuziqhenya, iiScorpios nazo ziqwalasele kwaye zilungile kakhulu ekuphakamiseni imimoya yabantu bonke.
Nangona kunjalo, abahlobo babo kufuneka babahloniphe kwaye balandele imigaqo yabo, ndingasathethi ke ngokusebenza kwabo ngokufanelekileyo xa kufuneka beziphathe njengabaphathi kunye nokukhuthaza abanye ukuba baphumelele.
Aba bemi bomthonyama abanakunqandwa ekufezekiseni iinjongo zabo kwaye bayazi kakuhle ukuba kungakanani umgudu ofunekayo kubomi obutofotofo nakwimpumelelo ethile.
Kubalulekile ukuba bangaze baxakeke yimisebenzi yabo kuba ngale ndlela, banokuba ndlongondlongo xa izinto kubomi babo bobuchwephesha zingahambi kakuhle. Kunzima ukuqikelela indlela abaziphethe ngayo, ungasathethi ke ukuba zingaphi iimfihlo abanazo kunye nendlela abanokuzifihla ngayo ezona mvakalelo zabo.
Kunokuba nzima kakhulu ukufunda iiScorpios kuba zihlala zimangalisa kwaye azithethi kakhulu. Bathanda kuphela ukujonga abanye nokwenza izithembiso. Emva kokwenza impazamo, iiScorpios zithande ukuba nobulumko kwaye zingaze ziphinde zenze okufanayo.
Kunokuthiwa ezona mpawu zabo zinkulu kukukwazi ukugxila, ukomelela, umtsalane, ukunyaniseka kunye nokuzimisela.
Xa kuziwa kubuthathaka, iiScorpios azinyamezeli, ziyalawula, zinempindezelo, ziindlongondlongo kwaye ngamanye amaxesha zingakhathali. Ke ngoko, kubalulekile ukuba bajolise kwinto ebenza babe ngabantu abalungileyo hayi eminye imiba.
Ngelixa banobuhlobo kwaye bevulekile, iiSagittarians azikabinabo abahlobo abaninzi. Bakhetha ukungqongwa kuphela ngabantu abambalwa abanokubathemba ngokwenene.
Ngapha koko, abemi beli phawu bajolise kakhulu kwikhondo labo lomsebenzi kwaye kuncinci kubuhlobo babo. Iingcinga ezinzulu kakhulu, kulula kubo ukuba balahleke kwilizwe lamaphupha kwaye bangavumeli abanye ukuba bangene.
Kunzima ukubabamba ngoonogada babo phantsi, ngakumbi ukuba bakhe benzakala ngaphambili, ke banika iingcebiso malunga nokuba nobunzima kwabo bakufaneleyo.
Ngelixa uchuma ekubeni nobuhlobo obunentsingiselo, kunzima ukufumana abantu abanokubaqonda aba bantu balapha. Bazinikele, banenkathalo kwaye banenkxaso, kodwa kuphela ngabo bangenakudlamka okanye benovakalelo.
I-Sagittarians yaziwa ngokungxama kunye nokungaligcini ilizwi labo. Ngapha koko, abayikhathalelanga indlela abanye abavakalelwa ngayo kwaye bangathetha ngokuvakalayo ngenyaniso eyoyikisayo, kwezona meko zingaphefumlelwanga.
Ngelixa abaninzi beza kubo, abayi kuqhubeka nabo bonke ubuhlobo babo kwaye badibanise ngokuthe ngqo. Kulula kubo ukuba banyamalale nje okwexeshana nasemva kokubuya kuba becinga ukuba ubukho babo abubalulekanga kangako kwaye inkululeko yabo ibaluleke kakhulu kubo.
Ngelixa ulibale malunga nemihla yokuzalwa, Abatoli bakhetha ukuba nengxoxo ende kunokuba banike isipho. Kufuneka ukuba bakhuthazwe kwaye bathathe inxaxheba kwii-adventures ezintsha kuba abanakuphumla kwaye bayayithanda imiceli mingeni.
Ke ngoko, abemi beli phawu bangasiwa kwintenetya, kwi-bungee-jump kunye nokusayinwa kweencwadi. Njengoko bathanda nje ukubona indlela abantu abacinga ngayo ngokuzimeleyo, abayi kuthandabuza ukuthatha inxaxheba kuzo zonke iingxoxo edolophini.
Nangona kunjalo, abahlobo babo akufuneki bababophe okanye bathethe into egwebayo ngendlela abaphila ngayo ubomi babo kuba banokucaphuka xa kusenzeka into enje.
Ama-Sagittarians akanangxaki nokwabelana ngolwazi lwabo, kodwa bafuna abahlobo abazi izinto ezininzi ngokunjalo, kuba banako ezona ncoko zintle.
Xa ungenzi into ecingayo, bahlala benesizathu esivakalayo kuba abemi balo mqondiso bayaziwa ukuba banike intsingiselo ekhethekileyo kwizimbo zomzimba ezahlukeneyo kwaye bangaze benze izinto kuba.
IScorpio Njengomhlobo: Kutheni Ufuna Enye
yintoni i-horoscope yokuhamba
Sagittarius Njengomhlobo: Kutheni ufuna enye
Umqondiso weScorpio Zodiac: Yonke into ekufuneka uyazi
Uphawu lweSagittarius Zodiac: Yonke into ekufuneka uyazi
INeptune kwi-Aquarius: Ibubumba njani uBuntu bakho kunye noBomi bakho
Indoda ye-Aquarius kunye neCapricorn Woman ixesha elide ukuhambelana
uyibuyisa njani indoda yam yomhlaza
Ilanga kwinyanga yomhlaza kwi-taurus
I-capricorn aquarius cusp ebhedini
Indoda gemini yomtshato womfazi
indlela yokuphumelela ibhinqa le-gemini
yintoni uphawu lwedisemba 22 zodiac
pluto kwindlu yesi-2